Ciidanka NISA Archives - Sawirrotv
Tag Archive for: 'Ciidanka NISA'
DEG-DEG: Gaari ay Cayrsanayeen Ciidamada Booliska oo Dhawaan ku Qarxay Degaanka Ex-Control Afgooye
February 27, 2017 – Waxaa goordhow nawaaxiga Ex-Control Afgooye ku qarxay gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa oo ay cayrsanayeen ciidamada dowladda. Sida aan wararka ku heleyno gaariga qarxay ayaa maanta weerar ka geestay degmada Boondoore, waxaana dableydii saarneyd gaarigaasi ay rasaas ku fureen gaari kale uu la socday shaqsi la sheegay in Dowlada u …
Ciidamada Nabad Sugidda oo soo Bandhigay Sawirrada Gaarigii ay Wateen Ragii Dilay Afhayeenkii Hore ee X/iyo Xeeb (SAWIRRO)
February 19, 2017 – Ciidamada Nabad Sugidda iyo sirdoonka qaranka ayaa soo qabtay Kooxo hubeysan oo la sheegay in ay wateen gaari NOAH-ah, kuwaasi oo shalay labo weerar oo qasaaro kala duwan dhaliyay ka geystay Degmooyinka Xamar Weyne iyo Hodan ee Gobolka Banaadir. Labada Weerar ayaa midkood lagu dilay Afhayeenkii hore ee Maamulka Ximin iyo …
Ciidamada NISA oo soo Bandhigay Sawirrada Howlgalkii lagu soo Qabtay Lacagta Faalsada ah (SAWIRRO)
January 17, 2017 – Ciidamada Nabad Suggida & Sirdoonka Qaranka ee (NISA) ayaa maanta Magaalada Muqdisho ku soo bandhigtay lacag badan oo dollar, kuwaas oo ay dhaqayeen lix nin oo xalay ay ciidamadu ku soo qabateen hawlgal gaar ah. Ciidanka Nabad Suggida oo si xoogan u hubaysan ayaa xalay xoog ku galay guri ku yaala …
September 27, 2016 – Ciidamo isugu jira Boolis iyo Nabad Sugid ayaa saakan salaadii Subax howlgal ka bilaabay Suuqa Bakaaraha iyo guud ahaan wadooyinka soo gala suqaasi, howlgalkii ay ciidamada ka fuliyeen Suuqaasi waxa ay ku soo qabteen dad Bartilmaameed ahaa oo ciidamada ay mudo raadinayeen. Saaka subixii hore ayaa waxaa Guud ahaan la xanibay …
Ibraahim Nadaaro oo ka soo Goostay Ururka Al Shabaab Iskuna soo Dhiibay Ciidamada Dowladda (VIDEO)
August 30, 2016 – Waxaa Ciidamada Dowladda Federaalka ee Soomaaliya isku soo dhiibay sarkaal sare oo ka tirsanaa ururka Al Shabaab, Ibraahim Aadan Ibraahim – Ibraahim Nadaaro oo kamid ahaa Saraakiisha sar sare ee ururka Al Shabaab, ayaa waxa uu go’aansaday inuu isga baxo ururka Al Shabaab. Laamaha ammaanka, ayaa waxay Sarkaalkaasi ku soo bandhigeen …